Dayniile oo bar-bar dhac ay la gashay Baydhabo guul u noqotay! | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dayniile oo bar-bar dhac ay la gashay Baydhabo guul u noqotay!
Dayniile oo bar-bar dhac ay la gashay Baydhabo guul u noqotay!
Muqdisho (SNTV)- Caawa tartan aqooneedka waxa uu dhexeeyay degmooyinka Baydhabo iyo Deyniil oo ka kala tirsan Goballada Bay iyo Benaadir.
Tartameyaasha Degmada Deyniile ee gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7-su’aal, waxa ay ka jawaabeen 3- su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen hal su’aal oo soo hareeer martay tartamayaasha Degmada Baydhabo, sidaa darteed tartameyaasha Degmada Deyniile waxa ay heleen 6-dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa dhankooda la weydiiyay 7-Su’aal, waxa ay ka jawaabeen 3- su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen hal suaal oo soo hareer martay Deyniile, sidaasi darteed tartameyaasha Degmada Baydhabo waxay heleen 6- dhibcood.
Tartamaasha labada degmo ayaa isku mari waayay su’aalihii ay ku tartamayeen, waxaana ay la yimaadeen min lix dhibcood dood dheer kaddib tartamayasha Degmada Baydhabo ayaa jebiyay xeerka tartanka u degsan, maadaama ay dood ka keenen su’aal ka faa’iideysi ahayd balse markii laga qanciyay ay ku raali noqon waayeen.
Guddoomiyaha Tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka Maxamed Abuukar Axmed Ma’da oo ka hadlay tartanka ayaa sheegay in maadaama waqti dheeri ah loo baahday la isku dayay in la qanciyo tartamayaasha degmada Baydhabo, marba hadii ay si qalad ah uga jawaabeen su’aashii ka faa’iideysiga ahayd, isla markaana ay ku xadgudbeen sharciga tartanka u yaalo ee dhanka anshaxa ah.
“Waxaan caddeynayaa markii aan kulan dheer ah qaadanay, oo tartamayaasha Degmada Baydhabo aan ku qancin waynay inay tartamayaan, maadaama tartanku uu ahaa mid bar baro ah, guddiga waxa uu go’aamiyay in dhibcihii tartanka lagu wareejiyay Tartamayaasha Degmada Deyniile” ayuu yiri Guddoomiyaha guddiga tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.
Guddiga waxaa kaloo uu sheegay in jadwalka tartanka wax laga badalay, kaasi oo laga dhigay 9:30 pm halka markii hore uu ahaa 10:00 pm.
Tartamayaasha Degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir ayaa caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka.
Tartanka ay tabineyso warbaahinta Qaranka isla markaana uu taaba gelinayo maamulka gobalka Benaadir waxaa ku wada ballansan degmooyinka Kismaayo & Dhuusamareeb oo ka kala tirsan Gobollada Jubada Hoose iyo Galgaduud.
Previous articleWasiirka Ganacsiga oo kulan la qaatay Guddiga maalgashiga
Next articleShir looga hadlayay sidii loo dedejin lahaa Mashaariicda horumarineed ee Noraway oo Muqdisho lagu qabtay